I-Geomoments-Iimvakalelo kunye nendawo kwi-app enye-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Iimpawu zeGeomoments-iimvakalelo kunye nendawo kwindawo enye
Geospatial - GISGoogle umhlaba / imephuezintshaInternet kunye neBlogsEzahlukeneyo
Utshintsho lwesine kwimizi-mveliso lusizalise ngenkqubela phambili enkulu kwezobuchwephesha kunye nokudityaniswa kwezixhobo kunye nezisombululo ukufezekisa indawo enamandla ngakumbi nenomdla kubemi. Siyazi ukuba zonke izixhobo eziphathwayo (iiselfowuni, iitafile, okanye i-smartwatch) ziyakwazi ukugcina inani elikhulu lolwazi, njengeenkcukacha zebhanki, idatha enxulumene nemeko yomzimba, ngakumbi idatha yendawo.
Kutshanje sifumene isimanga sokuphehlelelwa kwesicelo esitsha esidibanisa imeko yeemvakalelo, okusingqongileyo kunye nendawo yomsitho. IGeomoments ligama, lenziwa phakathi ku-2020 phakathi kobhubhane, kwaye kweli nqaku siza kuvavanya. Ngokwomphuhlisi, yinethiwekhi yentlalo, ayichaze njenge "uthungelwano lwehlabathi lwamaxesha, okanye amava ... Indawo yokugcina enkulu apho sigcina khona kwaye sabelane ngamaxesha ethu, amava, iziganeko ezenzeka kuthi ngomhla othile kwaye indawo. ”.
I-GeoMoMents sisicelo se-hybrid esenziwe nge-loníc, esisebenzisa izixhobo zefu zikaGoogle, iFírebase, ukugcina, ukuthumela imiyalezo kunye nokusingathwa. Ulwazi lugcinwa kwiGoogle Cloud Firestore, kwindawo yogcino lwedatha. Iifayile zeefoto zigcinwe kuGcino lwaMafu kuGoogle. IFirebase Messagíng isetyenziselwa ukuthumela imiyalezo kwangoko.
Isebenza njani iGeomoments?
Okokuqala, siza kukubonisa ujongano lomsebenzisi kunye nendlela ongaqala ngayo ukuqokelela iiGeomoments zakho. Emva kokukhuphela usetyenziso kwi Dlala ivenkile (I-Android), yifake kwifowuni kwaye uyivule, into yokuqala ebonakalayo yinkcazo eneenkcukacha ngendlela iGeoMoMents esebenza ngayo. Kwizixhobo ze-iPhone, usetyenziso luya kufumaneka phakathi ku-2021. Ngokukwanjalo, bongeze iqhosha lokungena ngeGoogle ngokukhawuleza, kwaye isaziso sibonakala sivumela indawo yesixhobo. Emva koko, idatha yeakhawunti yeGeoMoMents (GMM) iyaboniswa, kunokwenzeka ukongeza "isiteketiso" okanye isiteketiso, kunye nolwazi olufakelwe ngumsebenzisi kwisicelo nalo luyaboniswa.
I-GeoMoMents yindawo yokugcina amaxesha, indawo ethile, ngomhla othile, imvakalelo, imemori yokugcina kunye nokwabelana nehlabathi.
Emva koko unokufikelela kwimenyu ephambili, apho uya kuba nokufikelela kwizenzo ezahlukeneyo: ukuqala, i-GMM entsha, i-GMM yam, ii-GMM imephu ezikwi-Intanethi, Jonga (kungekudala), imidlalo ekwi-intanethi (kungekudala), lungiselela izilumkiso, iakhawunti kunye noncedo. Okwangoku zininzi zazo ezingafumanekiyo, kodwa sizama ezo sinakho ukufikelela kuzo. Kwindawo yekhaya kukho ipaneli esisiseko, apho ungongeza khona iGMM entsha, jonga ii-GMM, uphonononge imephu ye-GMM ekwi-intanethi, kwaye ulawule iakhawunti yomsebenzisi. Ukongeza umzuzu kulula, sichukumisa ukhetho "iGMM eNtsha" kwaye kwangoko kuya kuvela isikrini esitsha kunye nedatha ekufuneka siyongezile.
Kuyinto enomdla ukuba ilawulwa ziimvakalelo zomsebenzisi, kukho iqhosha "leemvakalelo" (1) apho unokukhetha khona ngokuthe ngqo nge-Emoji, ekhatshwa yindawo yezentlalo (2) apho uvakalelo luva usapho, abahlobo, umsebenzi, isikolo okanye iqela). Ngokwam, ndicinga ukuba ndingongeza iimeko ezingaphezulu kwezentlalo, kodwa njengoko ezi zihlala zizezona zisisiseko, amava kuwo onke afikelelwa
Yonke idatha kwiGeoMoMents yindawo-yokwexeshana. Ungajonga kuphela kwaye ubeke izimvo kwiGeoMoMents ezikufutshane kwisithuba kunye nexesha kwiGeoMoMent yakho.
Emva koko, ukhetha inqanaba lokuqina kwemvakalelo kwisikali ukusuka kwi-0 kuye kwi-10 (3), kwaye ukuba ufuna ukwabelana ngomzuzu esidlangalaleni okanye uwugcine ungaziwa kwi-app (4). Inkcazo (5) yinto ebalulekileyo ukuba ufuna ukukhumbula kanye ukuba kwenzeke ntoni ngalo mini, into efana nedayari. Okokugqibela, sinokongeza ifoto yomsitho ophawule iGeomoment. Ekugqibeleni, imephu ibonakala kunye nendawo kanye orekhoda kuyo umzuzu (6), nangona mna ndicinga ukuba lukhetho olunokuphuculwa kuhlaziyo lwexesha elizayo, mhlawumbi ukongeza ithuba lokuhambisa indawo apho ufuna ukuya khona ukurekhoda umzuzu ukuba umntu akaxhunyiwe kwi-Wi-Fi okanye idatha yeselula.
Ifoto yomzuzu inokongezwa irekhodi (7). Xa uchukumisa iqhosha lokugcina, usetyenziso lubonisa umyalezo "i-GMM yenziwe ngempumelelo", kwaye ukuba sifumana "iiMGMs zam" kwimenyu ephambili, zonke iiGeomoments esizongezileyo ziya kubonakala zilayishiwe, kunye nomhla kunye nexesha lokudala. Kule nxalenye yesicelo sinakho: ukujonga irekhodi, ukuvuselela ulwazi okanye ukucima irekhodi.
Into ekufuneka uyazi kukuba awungekhe wongeze iiGeomoments kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezi-6, isicelo sinika isilumkiso sokuba alikafiki ixesha eloneleyo, elinokuthi lithathelwe ingqalelo njengokusilela - nangona siqonda ukuba luguqulelo lokuqala lwe isicelo-, ukuba umsebenzisi uyahamba kwaye undwendwela iindawo ezininzi kwiiyure ezingaphantsi kwe-6, akunakwenzeka ukuba urekhode loo mzuzu.
Ekupheleni kweerekhodi, kwindawo ephambili yesicelo, isishwankathelo seGeomoments esele zenziwe ziyavela. Umzekelo ulwazi olubonisiweyo luyi-1 GMM efini, 1 GMM yendawo, enye idatha ihlala ikwi-0 de ulwazi olungqameneyo longezwe. Ukuba awusebenzisanga isicelo ixesha elide, unokuhlaziya ujongano kwiqhosha lokuhlaziya. Esinye isilumkiso esenziwa sisicelo asikokuphulukana nedatha yeakhawunti kaGoogle ehambelana nayo, kuba ukuba oko kuyenzeka akunakwenzeka ukuba ufikelele kwidatha ebhaliswe kwiiGeomoments.
Yenziwe nguFernando Zuriaga, umfundi wezobuNjineli boNxibelelwano ngoku uhlala eValencia - eSpain. Ungandwendwela ibhlog yakhe ngokunqakraza apha, apho banokukuthumela khona imiyalezo malunga neenkxalabo okanye igalelo malunga nesicelo.